China excavator sieve ịwụ emepụta na suppliers | MINYAN
Ezi eyi eguzogide, ogologo ọrụ lifte, mfe Ọdịdị na-adaba adaba mmezi.
Ezi eyi nguzogide, ogologo ọrụ ndụ, mfe Ọdịdị na-adaba adaba mmezi. A na-ejikarị ya eme ihe na ígwè, ihe owuwu ụlọ, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ọka, ọgwụ, fatịlaịza kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enyocha ihe.
Ngwaahịa a ebupụla na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, South Asia, Middle East, East Asia, South America na mpaghara ndị ọzọ, na ngwaahịa mma dị ukwuu. Enwere ike ịhazi ikike ọkọnọ nke ụlọ ọrụ ahụ n'oge yana iwu chọrọ.Ngwaahịa anyị nwere ike ịkwado ya niile, anyị na-anabata ndị ahịa biko zitere anyị eserese ma ọ bụ ụdị excavator. Anyị bụ ndị a factory na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na ngwaahịa nhazi, gụnyere excavator bọket OEM akụkụ dị.Akwụkwọ ikike:Afọ 1 maka akụrụngwa akwụkwọ igwe
Tụkwasịnụ IkikeTụkwasịnụ Ikike:50 Ibe / iberibe kwa ọnwa ịwụNkwakọ ngwaahịa & nzipuNkwakọ ngwaahịa nkọwaNkwakọ ngwaahịa nkọwa Pallet ọkọlọtọ mba ma ọ bụ nke osisi. 1. otu 20GP ike Ibu Ibu banyere 12-14 iberibe 1.0m3 ma ọ bụ 1.2m3 bọket maka 20ton excavator (Obosara erughị 42 sentimita asatọ)2. otu 40HC nwere ike ibu ihe 26-28 iberibe 1.0m3 ma ọ bụ 1.2m3 bọket maka 20ton excavator;3. otu 20GP nwere ike ibu ihe 8 iberibe 1.6m3 bọket maka 30ton excavator; 4. otu 40HC nwere ike ibu banyere 16 iberibe 1.6m3 bọket maka 30ton excavator.
Portshanghai / Lianyungang / QingdaoEtiti oge :
Ibu (iberibe) 1 - 1 2 - 10 11 - 50 50
Est. Oge (ụbọchị) 8 30 55 Ndi kpakorita
Q1. Gịnị bụ ọnụ ahịa gị kacha mma?A: Anyị bụ ndị ụlọ ọrụ anyị ga - enye gị onyinye asọmpi kacha mma.Q2. Kedu ka m ga - esi kpọtụrụ gị? Ekwesịrị m ịtụkwasị gị obi?A: can nwere ike ịhọrọ mmesi obi ike ahia dị ka ụzọ ịkwụ ụgwọ gị nke nwere ike ichebe uru gị, anyị bụ ndị ahịa ọla edo nke atọ bụ Alibaba.Q3. Gịnị bụ oge ịkwụ ụgwọ?A: Western union, T / T, ahia mmesi obi ike na-anabata.Q4: Olee mgbe ị ga-ewepụta ụbọchị gị?A: Ọtụtụ mgbe ụbọchị 25-30 gachara ịkwụ ụgwọ gị, anyị ga-anwa ike anyị niile iji mejupụta ihe ị chọrọ. Anyị na-elekwasị anya na njikwa nkwenye nke "Ogo izizi, Ntugharị dị mkpa, Ndị ahịa dabere".
Nke gara aga: ịwụnye nkume ịwụ
Osote: excavator ripper